TGV sy EMMO NAT: Tontosa ve ny fanonganam-panjakana? | Hevitra MPANOHARIANA |
TGV sy EMMO NAT: Tontosa ve ny fanonganam-panjakana?
2009-01-27 @ 19:05 in Politika
Nahagaga sy nahavariana tokoa ny fahasahian'ny Heil nandritra ny andro vitsivitsy izay. Nahavariana ihany, tsy dia mahalala ny lalàna aloha aho fa aoka hojeren'ny mpahay lalàna izany, fa "réquisitionné" eo ampelatanan'ny Ben'ny tanànan'Antananarivo ankehitriny ny mpitandro ny filaminana rehetra. Niteny ihany koa ny Heil fa efa nihaona mivantana tamin'ny EMMO NAT araka ny teniny, entina mandamina ny tanàna anatin'ny "couvre feu" izay napetraky ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, manomboka amin'ny 9 ora alina ka hatramin'ny 4 ora sy sasany maraina. Mbola tsy milamina mihitsy moa ny eto amin'ny tanàna hatramn'izao na dia efa mihamaromaro ihany aza izay maty nandritra ny fandrobana izay.
Toa mihamazava ny tetika, nataony izy tenany ireo korontana rehetra ireo mba hahazoany ny hery vondro-tafika eo ampelatanany, Holazainy fa rehefa nanome baiko ny miaramila izy no nanaraka ny baikony ireo hery mitam-piadiana rehetra ireo. Ny tena mahatalanjona ahy manokana dia ny EMMO NAT ve ny mifampiraharaha amin'ny mivantana fa tsy mba ny EMMO REG na ny EMMO FAR? Moa ve tsy efa midika zavatra ilay sehatra fitantanana ara-miaramila eo ampelatanan'ny Heil? ary moa ve tsy efa fantampantatra ihany fa karazandrazan'ny hoe "efa ampelatanantsika ny fahefana ara-miaramila manerana ny firenena amin'izao fotoana izao" no ho fanambarana lehibe holazainy eo amin'ny kianjan'ny 13 mey rahampitso? andro iray sisa no andrasantsika hahitana ny tena marina! Efa feno fifaliana izay ny mpanohana ny TGV sy ny mpialokaloka rehetra any ivelan'i Madagasikara any. Fihetsiketsehana no natao hatrizay fa efa vita omana hatry ny ela ny fanonganam-panjakana. Tsy mahagaga loatra raha tsy nanaiky ny hifampiraharaha amin-dRavalomanana intsony izy.
fanazavana: EMMO : Etat-Major Mixte Opération
Vaovao farany, ny ao amin'ny EMMO REG no nitafa tamin'ny mpanao gazety nilaza fa hotontosainy ny fampiharana ny "couvre feu", nomarihin'ny jeneraly ... tsy voaraiko tsara ny anarany dia ny Kaominina Antananarivo renivohitra no tena hanampy be dia be amin'ny fampitaovana azy ireo. Nolazainy ihany koa fa tsy hanakana velively ny famoriam-bahoaka hotontosaina rahampitso izy. Mbola afaka mieritreritra tsara izany zavatra re izany tsara isika na dia izany aza!
jentilisa 27 janoary 2009